I-WiFi 6: Iyintoni kwaye isinika ziphi izibonelelo kwi-Android | I-Androidsis
Unxibelelwano olungenazingcingo lubalulekile kwiifowuni zethu ze-Android. Ukongeza, ngokuhamba kwexesha, i-WiFi iguqukele ngokumangalisayo. Okwangoku, eyona isetyenzisiweyo yi-WiFi AC, esele sikuxelele ngayo. Kodwa umgangatho omtsha waziswa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, ekulindeleke ukuba uthathe indawo yawo.
Le yiWiFi 6, ebonisiwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ke ngoko, ngezantsi siza kukuxelela yonke into malunga nayo. Ke uyazi ukuba yintoni, iimpawu zayo eziphambili kunye neenzuzo eziza kusishiya nazo.
1 Yintoni i-WiFi 6
2 Izinto eziluncedo zeWiFi 6
Yintoni i-WiFi 6
Okwangoku, njengoko besesitshilo, enye esetyenzisiweyo yi-AC, ekwabizwa ngokuba yi-802.11.n. Enkosi ngayo, sinokuba nayo Unxibelelwano ukuya kuthi ga kwi-433 Mbps usebenzisa inethiwekhi ye-5 GHz. Kodwa, kwangaxeshanye, iifowuni ze-Android nazo zinenguqulo yangaphambili, inombolo yesi-4, enoluhlu oluthe kratya, kodwa icotha. Njalo sinokuphucula isantya ngeendlela ezithile.
I-WiFi 6 ngumgangatho omtsha, okwangoku ikhula ngokupheleleyo. Ithemba kukuba kunyaka olandelayo izakuba semthethweni kwaye iqale ukusetyenziswa. Kodwa okwangoku asinazo iindaba eziphathekayo malunga nayo. Iya kwaziwa njengeenyanga ezihambayo. Lo mgangatho mtsha uya kusebenzisa iibhendi ezimbini ezihamba rhoqo ngaxeshanye.
Le yinto eya kukuvumela unesantya esiphezulu, ukongeza kuluhlu olukhulu. Kuqinisekisiwe ukuba kwixa elizayo, xa sele kusekwe kwintengiso, kuya kubakho inkxaso yokuhamba rhoqo. Kodwa sisicwangciso sexesha elide. Isantya esiphezulu sesinye sezitshixo se-WiFi 6.
Ukusukela kule meko, iya kusinika ukukhawulezisa ukuya kuma-500 Mbps, emele ukunyuka kwama-20% xa kuthelekiswa naphambi kwayo. Ukongeza, sinendawo enkulu, njengoko besesitshilo. Ke siya kuba nakho ukusebenzisa i-2.4 GHz kunye neenethiwekhi ze-5 GHz ngaxeshanye. Inguqulelo eya kubuya umva ihambelane nokwahluka okwangoku. Le yinto eyenzekileyo kunye neenguqulelo zangaphambili ukuza kuthi ga ngoku.
Nangona, ukuze ufumane okuninzi kwi-WiFi 6 kwi-Android, akuyi kuba yimfuneko kuphela ukuba i-smartphone yakho ihambelane, siya kuyibona kwiinkcukacha zayo, kodwa sinendlela efanelekileyo. Ngokuqinisekileyo ukusukela kunyaka olandelayo zombini iifowuni kunye nemizila ehambelana nayo iya kuqala ukufika.
Izinto eziluncedo zeWiFi 6
Ngelixa ukufika kweWiFi 6 kulindeleke ukuba ifike ngokonyuka kwesantya, ayilonyuselo olukhulu. Imele ukwanda kwama-20% xa kuthelekiswa nomgangatho okhoyo ngoku kwimarike. Kulungile ukuba kukho ukukhula, nangona kwabaninzi kubonakala kungonelanga. Ngesi sizathu, bagxeka ukufika kwalo mgangatho mtsha kwintengiso. Kodwa ayisiyiyo kuphela inguqu esisizisela yona. Kukho ezinye izizathu zokuba kutheni isungulwe kwintengiso.
Kwelinye icala, kufuneka sikhankanye into ebonwa njengeyona nto iphambili ye-WiFi 6. Sisakhono soku lawula izixhobo ezininzi ngaxeshanye. Iya kwenziwa ngendlela efanelekileyo. Into ebaluleke ngokungathandabuzekiyo, kuba kule mihla, endlwini kukho izixhobo ezininzi ezidityaniswe ngaxeshanye. Ukusuka kwiifowuni ze-Android ukuya kwiikhompyuter, kodwa kunye nezinye iimveliso ezinje ngezithethi, izinto zokucoca okanye izibane. Ke sidinga unxibelelwano olufanelekileyo.
Ngale ndlela, sinokuqinisekisa ukuba Zonke ezi zixhobo zixhomekeke kunxibelelwano, ziya kusebenza ngokuchanekileyo. Ukuba baya kuba nokunxibelelana okuhle ngalo lonke ixesha. I-WiFi 6 izokukhathalela oku, enkosi kwinkqubo eyenzelweyo. Yi-OFDMA, eyinkqubo yokufikelela kumacala amabini edibanisa ngokungacwangciswanga kwaye iphinde isebenzise amaza afumanekayo kunye nezixhobo eziqhagamshelwe kwinethiwekhi efanayo.
Le yinto ebaluleke kakhulu kubasebenzisi abahlala kwimimandla eneefriji ezigcweleyo, kuba kukho amakhaya amaninzi okanye izixhobo ezisebenzisa yona. Enkosi kule nkqubo ifika kwiWiFi 6, uqhagamshelo oluzinzileyo olunoluhlu olulungileyo kunye nesantya esihle siya kuvunyelwa yabo bonke.
Ukongeza, olunye uphuculo olukhulu olulindeleke ukuba lufike ngeWiFi 6, ukunciphisa ukusetyenziswa kwamandla. Sele siyazi ukuba uqhagamshelo ngaphandle kwamacingo luyinto echitha ibhetri eninzi kwi-Android, nangona kukho amaqhinga kuyo. Kodwa le yinto ekudala ilindelwe. Ukusetyenziswa okuncinci, okuya kuthi kusivumele ukuba sigcine ibhetri elungileyo.
Nangona okwangoku kungekho nto ikhankanyiweyo kwindlela ekuthiwa iza kulondolozwa ngayo Ibhetri kwiWiFi 6. Ke kuya kufuneka silinde ukuze sibe nolwazi oluthe kratya malunga nayo. Eyona nto inokwenzeka, kwiinyanga zokuqala zika-2019 siya kwazi ngakumbi ngalo mgangatho mtsha oza kufika kwintengiso. Ucinga ntoni ngayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Yintoni i-WiFi 6? Zeziphi iingenelo esinazo?
I-Lenovo Z5s Ferrari SuperFast yoHlelo oluVulekileyo lweeNgcaciso eziTyhilayo ziya kuza ne-12GB RAM